ဆုတောင်းခြင်းအကြောင်း ( မဿဲ ၆း၅-၁၅ ) အပိုင်း (၁) | Calvary Burmese Church
PDF Readers click here
ဆုတောင်းခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ သခင်ယေရှု ၀မ်းနည်းခြင်း အကြောင်း တစ်ရပ်မှာ ဘုရားသခင်က လူ့အလိုကို လိုက်စေ လိုခြင်းအကြောင်း ဖြစ်သည်။ အခြားဘာသာ ၀င်များသည် ဘုရားသခင်အားသူတို့အလိုကို လိုက်စေရန် သွေးဆောင်၊ ဆွဲဆောင်၊ ခြိမ်းခြောက်တတ်သည်။ ဤကဲ့သို့ လုပ်နိုင်ပါက ဘုရားသခင်သည် လူတို့၏ အလိုအတိုင်း လိုက်လျှောက်သည်ဟုယုံသည်။ သို့ရာတွင် ခရစ်ယာန်များ ကိုးကွယ်သော ဘုရားသခင်သည် လူ့အလိုကို လိုက်လျှောက်တော်မမူ၊ ဤကဲ့သို့ ကြိုးစားရန်လည်း မသင့်ဟုသွန်သင်လိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်အား လူ့အလိုကို လိုက်လျှောက်ရန်လည်း ဆွဲဆောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်သည် လူသားများအတွက် အကောင်းဆုံးသိနှင့်ပြီးသားဖြစ်သည်။
ဤသို့ဆိုသော် လူများသည် အဘယ်ကြောင့် ဆုတောင်းနေကြပါသလဲ? ဆုတောင်းခြင်းဆိုရာ၌ ဘုရားသခင်မသိသေးသောအရာလည်းမဟုတ်၊ စိတ်တော်ကို ပြုပြင်စေလို၍ တောင်းလျှောက်ခြင်းလည်း မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်ထံသို့ အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုခုတင်ပြဖို့ရန် ကိုယ်တော် မသိသော အရာတစ်ခုမျှမရှိပါ။ စဉ်းစားသောအချက်များသည်လည်း မကြာခဏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် အတွေးခေါင်သူလည်းမဟုတ်ပါ။ ယုံကြည်စဉ်းစားချက်များ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် လူသားများမှ အမှန်ကန်ဆုံးကို မသိရှိ မဝေခွဲနိုင်သောကြောင့်သာ ဆုတောင်းရန် လိုအပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်အတွက် မလိုပါ။ ဤသို့ဆိုသော် ဆုတောင်းခြင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း? ဆုတောင်းခြင်း ဝေါဟာရအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်
“တောင်းခြင်း” ကလွမ်းမိုးပြီး “တောင်းလျှောက်ခြင်း” ဖြင့်စွဲမှတ်တတ်ပေသည်။ ဆုတောင်းခြင်း၌ “တောင်းလျှောက်ခြင်း” သည် တစ်ချက်အနေဖြင့် ပါဝင်ခြင်း သာဖြစ်ပြီး၊ သို့တိုင်အောင် တောင်းလျှောက်ခြင်းတစ်ခုတည်းနှင့် မပြီးပါ။ ဆုတောင်းခြင်းဆိုသည်မှာ “ဘုရားသခင်နှင့် စကားပြောခြင်း” “မိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်း” သည် အဓိကဖြစ်ပါသည်။ ဤအရာကို အဆိုတော် Fanny J. Crosby က အောက်ပါအတိုင်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံ စပ်ဆိုထားသည်။
ဤသီချင်းသည် ဆုတောင်းခြင်း၏ အခရာပင်ဖြစ်သည်။ ငါတို့သည် ဘုရားသခင် ထံ လိုအပ်သော အရာများကို တောင်းလျှောက်သောအခါ “တောင်းလျှောက်ခြင်း” ဖြစ်၍ အလားတူ ဘုရားသခင်၏ လိုအင်ဆန္ဒကိုလည်း နားထောင်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။ “ငါ့အလိုကို မလိုက်မချင်း” ဟူ၍ တင်းမခံပဲ “ဘုရားသခင် ကျွန်တော်၏ အလိုအတိုင်းမဟုတ်၊ ဘုရားသခင်အလိုတော်အတိုင်း ဖြစ်စေပါ” ဟူ၍ ဆက်ကပ်ရန်သာဖြစ်သည်။ ဤသို့ ဆုတောင်းရမည်မှာ ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်၌ သခင်ယေရှု ဆုတောင်းသော အချိန်၌ ပေါ်လွင်စေသည် (မဿဲ ၂၆း၃၉-၄၆)။ ကျမ်းတတ် နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ် Georgia Harkness က “ဆုတောင်းခြင်းဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင် အလိုတော် အပေါ်၌ ဆက်ကပ်ခြင်းသာဖြစ်သည်” ဟုဖေါ်ပြသည်။
မှန်ကန်သော ဆုတောင်းခြင်း ရရှိနိုင်ရန် အလို့ငှါ သခင်ယေရှုသင်ပေးသော ဆုတောင်းနည်း (မဿဲ ၆း၉-၁၃။ လုကာ ၁၁း၂-၄)ကို လေ့လာကြပါစို့။ ဘုရားသခင်သွန်သင်သော ဆုတောင်းနည်း အဆင့်ဆင့်ကို မစဉ်းစားမှီ အလုံးလိုက်အခဲလိုက် အောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြမ်းလေ့လာနိုင်ပါသည်။
စာတစ်စောင်ရေးသောအခါ လိပ်စာရှင်၏ လိပ်စာအရင်ဦးဆုံးရေးသကဲ့သို့ ဆုတောင်းရာ၌လည်း လိပ်စာ တိကျမှန်ကန်ဖို့လိုသည်။ ဖြစ်ရမည်မှာ “ငါတို့၏ အဖ၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသော” ဟုရေးသင့်သော်လည်း “ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသော ငါတို့၏အဖ” ဟုဆုတောင်းလေ့ရှိသည်။ ဆုတောင်းသူ၏ နာမည်နှင့် စာအိတ်ပေါ်၌ ရေးရမည့် လိပ်စာနှင့် စရခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
စာအိတ်ပေါ်၌ ရေးရမည့်လိပ်စာကို ရေးသားတောင်းလျှောက်ပြီးနောက်ပိုင်း ဘုရားသခင်နှင့် စပ်ဆိုင်၍ ဆက်လက်ဖေါ်ပြပြီး၊ အပိုင်း သုံးပိုင်း ခွဲခြားထားသည်။
(က) နာမတော်ကို ချီးမွမ်းခြင်း
(ဂ) အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက် ဖြစ်သည်။
၃။ လူနှင့်စပ်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာများ
ဘုရားသခင်နှင့် နာမတော်ကို ချီးမွမ်းသောအချက်သုံးချက်ကို ဖေါ်ပြပြီး၊ လူသားနှင့် စပ်ဆိုင်သော တောင်းလျှောက်ခြင်း အချက်သုံးခုတွေ့ရှိရသည်။
(က) ၀မ်းရေးဝရန် နေ့ရက်အစဉ်အဆက်ကျွေးမွေးရန်
(ဂ) မကောင်းမှုမှ ကွယ်ကာပေးရန်
၄။ နိဂုံးချုပ်နှင့် ချီးမွမ်းခြင်း
နိဒါန်း – ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသော ငါတို့၏အဘ
3. နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်းကင်ဘုံ၌ ပြည့်စုံသကဲ့သို့
ကျွန်ုတို့ပြစ်မှားသော အပြစ်များကို အကျွန်ုပ်တို့သည် လွှတ်သကဲ့
သို့ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလည်း လွှတ်တော်မူပါ။
အပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့ မလိုက်ပါစေပဲ၊ မကောင်းသောအမှုအရာ
နိဂုံး – အစိုးပိုင်သောအခွင့်နှင့် ဘုန်းတန်ခိုးအာနုဘော်သည် ကမ္ဘာအဆက်ဆက် ကိုယ်တော်၌ ရှိပါစေသော။ အထက်ပါအချက်များကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု ထပ်မံ၍ အသေးစိတ်လေ့လာကြပါစို့
ကောင်းကင်ဆိုရာ၌ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်ထိပ်ဖျား၌သာရှိပြီး မြေကြီးပေါ်၌ မရှိဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ယုဒအယူအဆအရ ဘုရားသခင်သည် လူနှင့် နှိုင်း၍မရ၊ တမူထူးခြားစေ၍၊ လူနှင့် ရောနှောနေထိုင်လေ့မရှိ၊ အဝေး (Transcendental) ၌ရှိသော ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်သည်။ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း၊ ဂုဏ်အသရေရှိခြင်း၊ အဆင့်အတန်မြင့်မားခြင်းကို လူသားနှင့် မတူကြောင်း ပေါ်လွင်စေရန်ရေးသားတင်စားခြင်း ဖြစ်သည်။
ငါတို့ = ငါတို့ ဆိုသော စကားလုံးသည် ခရစ်ယာန် ဘာသာ၏ ကျယ်ပြန့်ခြင်းကို ပေါ်လွင်စေသည်။ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းသည် တစ်ဦးချင်းကိုးကွယ်ခြင်း (Individualistic) မျိုးမဟုတ်၊ လူအစုအဝေးနှင့် ကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ “ငါတစ်ယောက်တည်း ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ရင် ပြီးရော” ဆိုပြီး တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ရန် သခင်ယေရှု အလိုမရှိပါ။ မက်သဒစ် အစပြုသူ John Wesley သည် “ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်း၌ တစ်ကိုယ်မဖြစ်နိုင်ပါ” ဟုဆိုထားသည်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ပါက ဘုရားသခင်၏ အမေးခံရမည်မှာ “သင့်ညီ အဘယ်မှာရှိသနည်း” ဟူ၍ဖြစ်သတည်း။ (ကမ္ဘာ ၄း၉) ဤကဲ့သို့ တကမ္ဘာလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သော (Universal) အရာဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားအားလုံးမှ “ငါတို့” ဟု သုံးနှုန်းမှသာ ခွဲခြားခြင်း၊ သင်းခွဲခြင်း ပျောက်ကွယ်၍ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်တည်ထောင်နိုင်မည်သာ။
အဘ= “အဘ” ဆိုသော စကားသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာ၌ ချိုသာ၍ ဘုရားသခင်နှင့် နီးစေသော စကားဖြစ်သည်။ အာဖရိကတိုက်ရှိ လူသားစား အမြောက်အများက ဘုရားသခင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဖြစ်၍ အဘနှင့်တူကြောင်းနားလည်သောအခါ “ဘုရားသခင်၏သားများ” ဖြစ်လာသည်။ “အဘ” ဆိုသော စကားသည် ဖေါ်ပြသော ဘုရားသခင်၏ အဝေး၌ရှိ ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်အသရေပေါ်လွင်ရန် အသုံးပြုသော “ကောင်းကင်” နှင့် ညီတူညီမျှဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးသည်။ အလွန်ဝေးလံသော ကောင်းကင်နိုင်ငံရှိ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့နှင့် အတူရှိသော “အဘ”ကဲ့သို့ အနီးအပါး၌ရှိသော ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်း၊ ငါတို့နှင့် အတူရှိကြောင်း (Immanence) ကိုဖော်ပြသည်။ လူသားတို့က ဘုရားသခင်အပေါ် အမြင်မှာ ဓမ္မဟောင်းရှိ ကမ္ဘာဦးကျမ်းမှ တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာပြီး၊ အထွတ် အထိပ်၌ “ချစ်သောအဘ” ကဲ့သို့ မြင်တွေ့နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤ ကဲ့သို့ မြင်နိုင်ရန် သခင်ယေရှုကလည်း သွန်သင်တော်မူသည် (လုကာ ၁၅း ၁၁-၂၄)။ ဘုရားသခင်ကို “အဘ” ဟုခေါ်နိုင်မှာသာလျှင် သူဖန်ဆင်းသော ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားအားလုံးကို “ညီ” ဟုခေါ်ဆိုနိုင်မည်ပင်။
ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ဟု ဆိုရာ၌ သတ်မှတ်ထားသောနယ်နမိတ်ကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပဲ ဘုရားသခင် အုပ်စိုးသောနေရာဟူသမျှပါဝင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်သည် ဘုရားသခင်၏ ပိုင်ဆိုင်သော ဘုရားသခင် ပိုင်သအုပ်စိုးသောနေရာများဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ “ယေရှုက ကောင်းကင်နိုင်သည် သင်တို့အထဲ၌ ရှိသည်” ဟုဆိုထားသည် (လုကာ ၁၇း၂၁)။ မြောက်များစွာသော လူတို့က ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် သခင်ယေရှု ကြွဆင်းလာမှ ပေါ်ပေါက်လာမည့် နိုင်ငံဟုထင်မိကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ခရစ်ယာန်၏ နက်နဲသောအရာ ယုံကြည်ချက်(Theology) ၌ အမျိုးမျိုးထင်ကြေးပေးကြသည်။ ဤအချက်အပေါ်လေ့လာသောအခါ
(က)ယေရှုကြွဆင်းလာမှအစပြုမည် (Albert Schwetzer)
(ခ) ယခုအချိန်ရောက်ရှိပြီ (C. H Dodd)
(ဂ) ဤကမ္ဘာပေါ်၌ တည်ဆောက်မည် (Karl Marx)
(ဃ)အစပြုပြီး ပြည့်စုံလာမည် (Oscar Cullmann)
အမှန်မှာတော့ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် ယေရှုခရစ်တော် ကြွလာသောအချိန်မှ အစပြုပြီး မပြည့်စုံသေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယအကြိမ်ကြွဆင်းလာသော အချိန်မှသာ ပြည့်စုံခြင်းရရှိပါမည်။ လူ၏ရာဇ၀င်သည် ဤ ပြည့်စုံခြင်းနေရာကို မျက်နှာပြုပြီး တရွှေ့ရွှေ့သွားလာနေကြပါသည်။ ယုံကြည်ခြင်း အားနည်းသူတစ်ချို့သည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ရောက်ရှိရေးကို အဓိကထားဆုတောင်းလေ့ရှိသည်။ သို့တိုင်အောင် ယေရှုမူကား ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော် ရောက်ရှိမည့်အကြောင်း မဖေါ်ပြပဲ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် ဤကမ္ဘာ၌တည်ဆောက်ဖို့သာလျှင် ဖေါ်ပြသည်။ သို့ရာတွင် သတိထားရမည်း အချက်တစ်ခုမှာ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်သည် ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ် အလိုလိုရောက်ရှိရန် မဟုတ်၊ လူသားများအပေါ်၌ရောက်ရှိတော်မူမည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သည် ယုံကြည်သူများအတွက် ဤကမ္ဘာလောက၌ တည်ထောင်ရန် မျှော်လင့်သူများဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ဒေါက်တာ ဒဗလျူ အိုကာရ်ဘား ဆိုသူက “နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသော” ဟုဆုတောင်းခြင်းသည် ကမ္ဘာတည်သ၍ကို ရည်ညွန်းပြီး၊ ယနေ့ ငါ၏အတတ်ပညာ အစွမ်းအစအားလုံး အသုံးပြုနိုင်ရန်လည်း တောင်းဆိုသည်ဟုဆိုသည်။
အပိုင်း (၂) ကို ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်။ (Click to read part 2)
This entry was posted on April 27, 2011 by thawngno in Articles Bible Study, Articles Christian Life, Rev. Dr. Simon Pau Khan En and tagged Prayer, Rev. Dr. Simon Pau Khan En.
83,972 Since July 2011